Ciidamada amaanka oo howlgal ku soo raafey mootooyin bajaaj oo sumad la’aan ah… – Hagaag.com
Ciidamada amaanka oo howlgal ku soo raafey mootooyin bajaaj oo sumad la’aan ah…
Wararka naga soo gaaraya Degmada Hodan ee Bartamaha Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Ciidamada amniga ay xalay sameeyeen howlgal balaaran oo ay ku soo qaqabteen Mootooyin ay sheegeen iney ahaayeen Sumad ama Taarigo la’aan.
Mootooyinkan oo ku dhow Lixdameeyo ayaa la isugu geeyay Saldhiga degmada Hodan, Waxaana halkaasi gaaray Gudoomiye kuxigeenka amniga iyo Siyaasada Gobolka Banaadir Maxamed C/llaahi Maxamed Tuulax.
Maxamed Axmed Cantoobo, Gudoomiyaha Degmada Hodan ayaa Saxaafada usheegay in howlgalka xalay ay sameeyeeen ee lagu soo qabtay Mootooyinkan ay tuhmayaan iney yihiin kuwo lagu geyso falalka lidiga ku ah amniga, Hadey ahaan leheyd dilalka, Cabsi gelinta iyo Dhaca Tilifoonada.
Gudoomiye Tuulax ayaa isna amaanay Ciidamada sameeyay Howlgalka amnia xaqiijinta, isagoona tilmaamay in mudada Bishan Ramadaan sare loo qaaday Feejignaanta Hay’adaha amaanka ee dalka gaar ahaan Caasimada.
Gudoomiye Kuxigeenka amniga iyo Siyaasada Gobolka Banaadir Maxamed C/llaahi Maxamed Tuulax ayaa dhinaca kale digniin udiray wadayaasha Mootooyinka Bajaajta ee aan sameysan sharciyada Wada Marista.
“Waxaan ku suganahay saldhigga degmada Hodan oo lagu soo qabtay gaadiidka loo yaqaano Mooto Bajaajka, kuwa badan oo Taargo la’aan ah, waxaa dhacday Mooto Bajaaj aqoonsi la’aan ah in caawa dad lagu rasaaseeyay, dhalinyarada waxaan fareynaa in ay raadsadaan aqoonsiyadooda, ma aqbali doono in sharci la’aan lagu shaqeysto.
Hadalka Gudoomiyaha Amniga Gobalka Banaadir Mr Tuulax ayaa kusoo aadaya xili magaalada muqdishu aad usii badaneyso dilalka qorsheysan ee laga fulinaayo waxaana jira warar sheegaya in bajaajyada qaar ay leeyihiin rag ka mid ah musuuliyeen ka tirsan dowlada islamarkasne aysan laheyn wax sharci ah waa sababta ay usameysan la’yihiin Dukumiintiyada loo baahan yahay.